Iqeqesha nezifundiswa inhlangano yomame
AMANYE amalungu eBuhle Zondo Foundation eMsinga, enza imisebenzi eyahlukene kwezolimo, okusiza amalungu omphakathi kule ndawo Isithombe: SITHUNYELWE
Bongiwe Zuma | May 27, 2021
EMUVA kweminyaka emibili kwasungulwa inhlangano ehlanganisa omama nezinhlaka ezehlukene zomphakathi eMsinga, sekwakheke inqwaba yamathuba emsebenzi.
IBuhle Zondo Foundation, eyasungulwa ngo-2018 nguDkt Buhle Zondo, ngenhloso yokusiza omama ebabentula amathuba emsebenzi, seyiqashe abantu abangaphezulu kuka-150, okubalwa omama abatshalayo, abafelokazi, intsha namalungu omphakathi angasebenzi.
IBuhle Zondo Foundation ibhekele ukufuywa kwezinkukhu, kubunjwe izitini zokwakha, kukhiqizwe amaqanda, kutshalwe imifino nezithelo ezahlukene kuye kudayiswe imikhiqizo eyahlukene.
KUNGESIKHATHI bematasa besebenza emasimini eMsinga, okwenziwa yinhlangano iBuhle Zondo Foundation
USihlalo wayo, uNkk Victoria Ngobese, uthi kwakubangwa imsebenzi yokupheka kwesinye sezikole nakhona kudingeka abesifazane ababili, kwaze kwabhikishwa, kwaze kwangenelela uDkt Zondo.
Insimu okutshalwa kuyo izinto ezehlukene okubalwa nobhontshisi Izithombe:ZITHUNYELWE
UNkk Ngobese, oseneminyaka eyibambile futhi eqinisekisa ukuthi abesifazane babamba iqhaza kakhulu emisebenzini eyenziwayo, uthe kuyamangaza ukuthi umbono womuntu osemncane ukwazi ukukhulisa abesifazane namadoda emizi. Uveze ukuthi kunabantu abavuse amakhaya, bakha imizi ngemali abayithola ngokudayiswa kwemikhiqizo yabo.
"Abafelokazi kabaseyona inhlekisa emphakathini. Bayakwazi ukubhekana nemizi nokukhulisa izingane. Inqwaba yabantu abangasebenzi seyiyavuka ngosizo lomuntu omncane obe nengqondo enkulu kuneyethu sibadala. Akekho umuntu ongasizakali ngoba noma sekuyisikhathi sesivuno kuyaqashwa abantu abazosiza," kusho uNkk Ngobese.
Le nhlangabo kayigcini nje ngokusiza izakhamizi kodwa ibuye ibhekele nentsha ephuma ezikoleni efisa ukuzithuthukisa ngolwazi emkhakheni wezolimo.
UNksz Zuzile Zondi, waseMsinga obenza iFarming Management eMajuba TVET eDundee, uthe ungomunye wabantu abacotshelelwa ngolwazi kwiBuhle Zondo Foundation.
Uthe yize esabala izinyanga ekule nhlangano kodwa kuningi asekuzuzile. Izinto azogxila kuzo kule nhlangano wukufunda indlela okubhekelwa ngayo izimali, izindaba zabasebenzi kanjalo nezitshalo.
"Sengithole ulwazi oluningi, ngifunda nendlela okubhekelwa ngayo izitshalo, zikhuliswa kuze kube ziyavunwa. Kuyangijabulisa kakhulu ukuthola inhlangano engasekhaya enolwazi engiludingayo ukuze ngikwazi ukusungula eyami inhlangano ngelinye ilanga," kusho uNksz Zondi.
Inhlangano njengamanje imatasa nesivuno njengoba kade ikhipha amakinati nobhontshisi. Manje ilungisela nokuvuna umbila.